၂၀၁၀ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Posted by P.Ti at Thursday, December 24, 20097comments Links to this post
Posted by P.Ti at Tuesday, December 22, 2009 13 comments Links to this post
ရန်ကုန်ကအလည်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းက ရှမ်းပါ။ သူလာလည်တုန်း သူငယ်ချင်းတွေအတူ ညစာစားဖြစ်တုန်း အကြောင်းဆက်စပ်ကာ သူတို့အိမ်ကို အလည်လာတဲ့ ရိုးသားတဲ့ ရှမ်းအမျိုးသားကြီး တစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီရှမ်းအမျိုးသားက အင်မတန်ခေါင်တဲ့ရှမ်းရွာကဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာစကားလည်း မတတ်ဘူး။ ရန်ကုန်ကို တစ်ယောက်ထဲ ရထားစီးပြီးသွားမယ် ဆိုတော့ လမ်းမှာ ထမင်းစားမယ်ဆို ဘယ်လိုမှာစား ရမလဲဆိုပြီး မြန်မာလို့ ပြောတတ်တဲ့လူတွေကိုမေးပါတယ်။ အမေးခံရတဲ့လူတွေကလည်း သူမှတ်နေရတာတွေများပြီး မေ့သွားမှာစိုးတာနဲ့ ထမင်းဆိုတာနဲ့ သက်သတ်လွတ်လို့သာပြောလိုက် သင်ပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း သက်သတ်လွတ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာမသိပဲ မှတ်ထားလိုက်ရော…
ဒီလိုနဲ့ ရထားနဲ့ ခရီးထွက်လာပြီး ဘူတာတစ်ခုရပ်တော့ ရထားပေါ်ကနေ သက်သတ်လွတ် ဆိုမှာလိုက်ပါတယ်။ ဈေးသည်က ထမင်းနဲ့ အသီးအရွက်ဟင်းတွေလာပေးတာနဲ့ စားလိုက်ရပါတယ်။ နောက်ဘူတာမှာ အဲလိုပဲ သက်သတ်လွတ်လို့မှာလိုက်ပြန်ရော… ထမင်းနဲ့ အသီးအရွက်ဟင်းတွေ လာပေးတာနဲ့ စားလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ အဲတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ သူမှာလိုက်တိုင်း အသားလည်းမပါဘူး၊ စားလို့လည်း မကောင်းဘူး။ အသားဟင်းကိုလည်းစားချင် သူလည်းဘယ်လိုမှာရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတော့ နောက်ရပ်တဲ့ဘူတာမှာ ရထားအောက်ကို ဆင်းပြီး မှာစားလို့ စိတ်ကူးပြီး ပြီးလာပါတယ်။
နောက်ဘူတာရောက်လို့ ရထားလည်းရပ်ရော ရထားပေါ်ကနေဆင်းဖို့အလုပ် အောက်ကနေပြီး ဈေးသည်က “မလိုင်လုံး… မလိုင်လုံး” နဲ့ အော်တာကြောင့် ရထားပေါ်ကနေ မဆင်းရဲတော့ဘဲ ထမင်းကို သတ်သတ်လွတ်လို့ပဲမှာပြီး အောင့်အီးပြီးစားလိုက်ရပါတယ်။
နောက်ဘူတာရောက်လို့ အောက်ဆင်းမယ်ကြံလိုက်တော့လည်း အောက်ကဈေးသည်က “မလိုင်လုံး… မလိုင်လုံး” လို့အော်ပြန်ရော… အဲဒါနဲ့ သတ်သတ်လွတ်နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားရပြန်ပါရော…
ရန်ကုန်လည်းရောက်ရော သူငယ်ချင်းရဲ့အမေကို ရှမ်းလို ပြောပြပါတယ်…
“လမ်းမှာ ထမင်းစားတာ အသားဟင်းလည်းမပါဘူးဗျာ…”
“ထမင်းကို သက်သတ်လွတ်လို့မှာရတယ်လို့ သင်ပေးလိုက်လို့ သက်သတ်လွတ်လို့ပဲ မှာတာပေါ့…”
“နောက်ပြီး အောက်ဆင်းပြီးစားမယ်လုပ်တော့လည်း အောက်ကလူတွေက မလိုင်လုံး (မဆင်းနဲ့) ၊ မလိုင်လုံး (မဆင်းနဲ့) လို့ပြောပြောနေတော့ အောက်ကို ဆင်းလို့ မရခဲ့ပါဘူးဗျာ… ” တဲ့…
မလိုင်လုံး ဆိုတာ ရှမ်းလို မဆင်းနဲ့ ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရတယ်တဲ့လေ…။
နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း သူ့အဒေါ်တစ်ယောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတာကို ပြောပြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ တိုင်းပြည်တွင်းမှ အခွင့်အလမ်းတွေနည်းပါးလာကြတော့ သူများတိုင်းပြည်မှာ စွန့်စားပြီး အလုပ်ထွက်လုပ်ကြရပါတယ်။ အစတုန်းကတော့ မြို့ကြီးပြကြီးကလူတွေသာ ထွက်ကြတာများပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ နယ်မြို့လေးတွေကလူတွေ၊ အခုတော့ တောရွာမှာနေတဲ့လူတွေပါ ထွက်လုပ်နေပါပြီ။ အဲဒီတော့ တချို့တလေကျတော့လည်း လေယာဉ်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံက မရှိကျတော့ နိုင်ငံခြားကိုသွားရမယ် စိတ်ပူပန်မှုနဲ့ ရောထွေးပြီး စိတ်ထဲထင်ရာလုပ်လိုက်မိတောလေးတွေရှိပါတယ်။ ရယ်စရာအဖြစ်အနေနဲ့သာ ပြောမိကြတာပါ စိတ်ထဲမှာလည်း သနားမိပါသေးတယ်။
တခါက ကျေးလက်က ကောင်လေးတစ်ယောက် နိုင်ငံခြားကိုထွက်ဖို့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ လေဆိပ်အထွက်မှာ လ.၀.က (immigration) ကောင်တာကိုဖြတ်၊ ပြီးတော့ အကောက်ခွန် ကောင်တာကို ဖြတ်ရပါတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေကို x-ray ကို စစ်တဲ့နေရာကို ရောက်လာပါတယ်။
ကောင်လေးက ခရီးသွားအတွေ့အကြုံ သိပ်ရှိဟန်မတူပါဘူး။ အိတ်တွေကို x-ray နဲ့စစ်ရတယ်ဆိုတာ မသိတော့ ဒီအတိုင်းပဲ အိတ်ကိုမပြီး လမ်းဆက်လျှောက်လာပါတယ်။ x-ray ဖြတ်ဖို့ အိတ်တွေတင်ရတဲ့ conveyer နေရာအနားလည်းရောက်ရော လေဆိပ် ၀န်ထမ်းက conveyer ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး
“ဟဲ့ကောင်လေး … အိတ်ချလိုက် အိတ်ချလိုက်… ” လို့လှမ်းအော်လိုက်တော့
ခရီးသွားကောင်လေးက ဘာမပြောညာမပြော conveyer ပေါ် လှဲအိပ်ချလိုက်ပါရော…. တဲ့။
ဟုတ်တယ်လေ… စကားပြောတာ သတ်ပုံမှ မမြင်ရတာ။ အဲတော့ အိတ်ချလိုက်လို့ပြော အိပ်လိုက်တာ သူ့အပြစ်မှမဟုတ်တာပဲနော်…
အဲလိုပြောကြတော့ ကျွန်တော်ကလည်း သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို သတိရလို့ပြောပြမိတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့အဖြစ်တွေက ဘာသာစကားတစ်ခုကို မတတ်လို့ အဆင်မပြေတာ နဲ့ စကားကို တတ်ရဲ့သားနဲ့ နားလည်မှုလွဲလို့ ဒုက္ခရောက်တာတွေပေါ့။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အဖြစ်ကတော့ မြန်မာစကားကို နားလည်လို့ ကြုံရတဲ့အဖြစ်ပါ။
သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ ကျော် အစပိုင်းမှာ စင်ကာပူမှာ မြန်မာတွေ အခုလောက်မများသေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ နေရာတိုင်းမှာ အခုလို မြန်မာအချင်းချင်း ခလုပ်တိုက်မိလောက်အောင် မဆုံမိကြဘူးပေါ့။
တစ်ရက် သူငယ်ချင်းနဲ့ သူ့အဖော်၊ နှစ်ယောက်သား City Hall ဖက်ကို ရထားစီးလာကြပါတယ်။ လမ်းမှာထိုင်စရာနေရာရလာပြီး အေးအေးဆေးဆေး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မိန်းကလေးတို့ ထုံးစံ စကားဖောင်ဖွဲ့ပြီး ပြောလာကြပါတယ်။ ဘူတာတစ်ခုရောက်တော့ သူတို့ဘေးက လူတစ်ယောက် ထသွားတော့ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတစ်ယောက်က ၀င်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားလည်း ထိုင်ပြီးရော သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး စကားပြောလိုက်ပါတယ်။
“အေးလေ ဟယ်… နံလိုက်တာ အိမ်ကနေ ရေချိုးမလာဘူးလား မသိပါဘူး… ဟင်း…”
သူတို့လည်းပြောပြီးရော အိန္ဒိယနွယ်ဖွားက သူတို့ဖက်လှည့်ပြီးတော့...
“ဟာ… ကျွန်တော်ရေချိုးလာပါတယ်ဗျာ…” လို့လည်းထပြောလိုက်တော့ နှစ်ယောက်သား မျက်လုံးပြူးသွားပြီး…
“သြော် မြန်မာမှန်းမသိလို့ ပြောလိုက်မိတာ… ဆောရီး…” လို့ပြီး မျက်နှာပူတာနဲ့ City Hall မရောက်သေးပဲ နောက်ဘူတာမှာ ဆင်းနေခဲ့ရတယ်တဲ့…
အခုတော့လား စင်ကာပူမှာနေရင် ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့ လူတွေက အိန္ဒိယနွယ်ဖွား၊ တရုတ်နွယ်ဖွား၊ မလေးနွယ်ဖွား မကလို့ ဘာနွယ်ဖွားရုပ် ပေါက်နေ ပေါက်နေ မြန်မာလို ပေါက်ကရ မပြောလေနဲ့ ကိုယ့်ဘေးမှာ မြန်မာတစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် ရှိနေသည်ကို သတိချပ်မိကြပါနော်…
Posted by P.Ti at Thursday, December 03, 20099comments Links to this post
Labels: မျှဝေခံစားခြင်း, ဟာသ, ဟိုရောက် ဒီရောက်
Posted by P.Ti at Thursday, December 03, 2009 1 comments Links to this post
Posted by P.Ti at Monday, October 19, 2009 13 comments Links to this post
Posted by P.Ti at Thursday, October 15, 20097comments Links to this post
Posted by P.Ti at Wednesday, October 14, 2009 11 comments Links to this post
လေယာဉ်အတက်မှာ အမေနဲ့ စကားပြတ်သွားပြီး ပြန်ပြောဖြစ်ကြတော့
“အမေလည်း ဒီကိုလာသာလာတာ စိတ်ကလေးနေတာ… အခုတော့ စိတ်ပေါ့သွားပြီး…”
“ဟုတ်တယ် အမေ။ သားလည်း အဲလိုပဲ။”
“သား ဆယ်တန်းမဖြေခင်လေးမှာလည်း အဲလိုဖြစ်နေတာကို မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား… ”
[ဆယ်တန်း စာမေးပွဲမဖြေခင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ဒီမှာစာရှည်မှာစိုးလို့ သပ်သပ်ရေးပါ့မယ်]
ပြီးတော့ အိမ်အကြောင်း၊ ကျွန်တော့်အလုပ်အကြောင်းတွေပြောရင်း လေယာဉ်မယ်ကိုခေါ် ရေတစ်ခွက်တောင်းသောက်လိုက်ရသည်။ စိတ်မောလူမောဖြစ်နေတာ ကျန်နေတုန်းပဲကိုး။
ခဏနေ အနားကလူတွေအိမ်မောကျစပြုလာတော့ အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးတာနဲ့ စကားပြောတာကို အသာရပ်၊ ခုံကို နောက်အသာလှန်၊ စောင်ခြုံကာ အိပ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့သည်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်မပျော်ပေမယ့် နည်းနည်းတော့ အနားရလိုက်ပါသည်။
ပျံသန်းချိန် ငါးနာရီကျော်လောက်မှာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ မနက်စာစားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ လေယာဉ်က ပျံသန်းနေတဲ့ အမြင့်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့ချလာသည်။ ဂျပန်စံတော်ချိန် မနက် ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ်လောက်မှာ တိုကျို နာရီတာလေဆိပ်ကိုရောက်သည်။
လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီး အဆောင်အဦးထဲအ၀င်မှာ ကျွန်တော့်နာမည်ရေးထားတဲ့ စာရွက်ကိုကိုင်ပြီးစောင့်နေတဲ့ ဂျပန်မ ချောချောလေးနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့များပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးရောက်လာပါသည်။ အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတော့ ပူပန်မိလိုက်ပါသေးသည်။
ဂျပန်မလေးတွေနားရောက်တော့ ခဏရပ်လိုက်ပြီး သူတို့ကိုင်ထားတဲ့ စာရွက်ကိုပြရင်း
“ဒီနာမည်က ကျွန်တော့်နာမည်ပါ… ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့် ” လို့မေးလိုက်ပါသည်။
ဂျပန်မလေးတွေ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ခဏတော့မှင်သက်သွားဟန်ရှိသည်။
“ဟို… လူကြီးမင်းရဲ့ အိတ်က ဒီလေယာဉ်နဲ့ ပါမလားဘူး… အဲဒါ နောက်လေယာဉ်နဲ့မှ ပါလာပါမယ်…” လို့ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြောပါသည်။
အဲတော့မှ ခုနက မှင်သက်သွားတယ်ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ အားယူလိုက်တာကို သဘောပေါက်လိုက်ရပါသည်။
ဟုတ်တာပေါ့။ လူတောင် မနည်းပြေးလာရတာ.. အိတ်ကတော့ ဘယ်ပြေးလာနိုင်ပါ့မလဲ။ အိတ်ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုတော့ မျှော်လင့်ထားပြီးသားပါပဲ။
“ဟုတ်ပြီ… အဲတော့ ဘယ်တော့ နောက်လေယာဉ်ရောက်မှာလဲ… ”
“အဲတော့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ… ငါပြန်လာယူရမှာလား…”
စိတ်ထဲမှာ လာယူခိုင်းလို့ကတော့ သူတို့ကိုပို့ပေးဖို့ ပြောလိုက်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ တေးထားလိုက်မိပါသည်။ ထိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ စိတ်မကျေနပ်မှုကရှိနေသေးသည်။
“မလိုဘူးရှင့်… လာယူဖို့မလိုပါဘူး… ကျွန်မတို့ ပို့ပေးမှာပါ။ Immigration ဖြတ်ပြီးရင် ANA (အာနာ) ကောင်တာကိုလာခဲ့ပါ… တည်းမယ့် လိပ်စာကိုသာပေးလိုက်ပါ။ မနက်ဖြန်မနက်ရောက်အောင် ပို့ပေးပါ့မယ်…”
“အဲ… ဟုတ်ပါပြီ… ANA ကောင်တာကိုလာရမှာနော်…”
“ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်… ကျွန်မတို့ စောင့်နေပါမယ်… အိတ်မပါလာတဲ့အတွက် အများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်… ” ဆိုပြီး ခါးလေးညွှတ်ပြီးပြောပါသည်။
စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သွားသည်။ ဂျပန်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကြားဖူးပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကြုံလိုက်တော့ တကယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ တခါတည်းလက်ခံလိုက်မိသည်။
တင်းကြပ်သည်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဂျပန် Immigration ကိုဝင်တော့ တစ်ယောက်ချင်းစီသွားဖို့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က ပြောနေပေမယ့် သုံးယောက်တခါတည်းသွားချင်တယ်… လူကြီးနှစ်ယောက်က မိဘတွေပါပြောတော့ ပြန်ပြုံးပြပြီး သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ လက်လေးပြပါသည်။
ကောင်တာရောက်တော့ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့ နှုတ်ဆက်ရင်း လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပြလိုက်ပါသည်။
“သူတို့က ခင်ဗျားရဲ့ မိဘတွေလား… ” လို့ တာဝန်ကျ ၀န်ထမ်းအမျိုးသားကပေးပါသည်။
“ဟုတ်ပါတယ်… ” လို့ ပြန်ပြောတော့ သူက ပြန်ပြုံးပြရင်း
“ဟုတ်တယ်… ငါ့အမက ဒီမှာ တက္ကသိုလ်တက်နေလို့ ငါတို့ အလည်လာတာလေ…”
“…” ပြန်ပြုံးပြရင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ ဗီဇာတို့ကို စစ်ဆေးနေပါသည်။ ပြီးတော့မှ
“အမက ဘယ်တက္ကသိုလ်မှာတက်နေတာလဲ… ”
“သြော် … ဟုတ်ပါပြီ … ”
Immigration ၀န်ထမ်းက အ၀င် တံဆိပ်တုံးထု၊ white card ကို ကပ်ပေးကာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုပြန်ပေးလိုက်ပါသည်။ အားလုံးလွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပြီးသွားပါသည်။
အပြင်ရောက်တော့ အဖေနဲ့အမေတို့ရဲ့ အိတ်တွေကို သွားယူဖို့ လုပ်တော့ အဲဒီအိတ်တွေနားမှာ ခုနကတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဂျပန်မလေးတွေ ရပ်စောင့်နေတာကို ထပ်တွေ့လိုက်ရပါသည်။
“ANA ကောင်တာကို ရှာမတွေ့မှာစိုးလို့ ဒီမှာစောင့်နေတာပါ…” လို့ ပြုံးပြီး ပြောပြသည်။
ANA ကောင်တာလို့ပြောပြီး ရှာလာလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ စိတ်မရှိပဲ အခုလိုကြိုစဉ်းစားပေးပြီး လာစောင့်ပေးနေတာ စိတ်ထဲမှာ နွေးထွေးသွားသည်။ ဂျပန်ကိုအလည်လာတဲ့လူတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကိုလည်း ရလိုက်ပါသည်။
ကောင်တာမှာ တည်းမယ့် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် ကိုပြောပြလိုက်တော့ ချက်ချင်းပဲ ဟိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီး မေးလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော့်တို့နာမည်နဲ့ တည်းမယ့်စာရင်းရှိလားဆိုတာလှမ်းမေးတာပါ။ လိပ်စာပေးထားတာ မသေချာမှာ စိုးရိမ်လို့ ထင်ပါသည်။
နောက်နေ့မနက်မှာ ပစ္စည်းလာပို့မယ်ဆိုတာ သေချာထပ်ပြောပြန်သည်။ အားလုံးပြီးတော့ ကောင်တာကနေထွက်တော့
“အခုလို အိတ်နောက်ကျနေတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်… ” ဆိုပြီး ခါးလေးညွှတ်ခါထပ်ပြောပါသေးသည်။
စင်ကာပူမှာဆို တောင်းပန်ပါတယ် စကားလုံးရဖို့ မနည်းပြောကာမှ မပြောချင်ပြောချင် ဆောင့်ကာအောင့်ကာ ဆောရီး… လို့ပြန်ပြောတတ်သည်။ ဂျပန်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကတော့ တကယ်ပဲ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းလှသည်။
အပြင်ရောက်တော့…. မမစောင့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ သူကလည်းပြေးလာပြီး လာကြို… ကျွန်တော်တို့ကလည်း လေယာဉ်ပေါ်ကယူလာတဲ့ သစ်ခွပန်းလေးတွေကိုပေးလိုက်ပါသည်။
အခုမှပဲ လိုရာခရီးရောက်ပါတော့သည်။ မိဘတွေလည်း ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်လို့ တည်းမယ့် ဟိုတယ်ကို လေဆိပ်ကနေ ရထားနဲ့သွားကြပါတော့သည်။
တရက်စာရေးလို့ မပြီးသေးပေမယ့် စောင့်နေရတာထက်စာရင် နည်းနည်းဖတ်ရတာပိုကောင်းမလားလို့ ပြီးသလောက်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူး...
Posted by P.Ti at Tuesday, October 13, 20097comments Links to this post
Posted by P.Ti at Monday, October 12, 2009 8 comments Links to this post
နောက်ကျ ပိုးကောင် နဲ့ နောက်ကျငှက်
တစ်နေ့က အိပ်ရေးမ၀တ၀နဲ့ နောက်ကျနေလို့ ရုံးကို ခပ်သုတ်သုတ်ကလေး လမ်းလျှောက်နေတုန်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် ပူပန်စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ ခပ်သွက်သွက် လမ်းလျှောက်လာတာ တွေ့လိုက်ရပါသည်။
ဘေးကရှောင်သွားတုန်း အဲဒီမိန်းမကနေ တရုတ်လို ကွိစိကွစ စကားလာပြောပါသည်။ ဒီတခါတော့ နည်းနည်းလည်သွားပါပြီ။ ဝေါပုဝှေ့ကျန်ဝှါရီ လို့ ပြန်မပြောလိုက်တော့ဘူး။
“ငါ တရုတ်လိုမပြောတတ်ဘူး…” လို့…
အဲတော့မှ “ဒါဆို အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ပြောတတ်တာပေါ့နော်…”
“ငါ့ကို တစ်ခုလောက်ကူညီပါ… ငါ့သမီးလေးကို အိမ်မှာ အိမ်တံခါးပိတ်ထားခဲ့မိတယ်။ သော့ကိုလည်း ငါယူလာခဲ့မိတယ်။ အခု သမီးကျောင်းသွားဖို့ အိမ်ထဲမှာ ပိတ်မိနေတာ ငါပြန်ပြီး ဖွင့်ပေးရမှာ... အခုအိမ်ပြန်ဖို့ ရေးကြီးသုတ်ပြာ အလုပ်ကထွက်လာတာ ပိုက်ဆံအိတ် ကျန်ခဲ့တယ်…”
အဲဒီအမျိုးသမီးကြီး ဒီစကားကို မရပ်မနားဆက်ပြောသည်။
“ငါအိမ်ပြန်ဖို့ လမ်းစရိတ် ခဏချေးလိုက်ပါ… ပြီးတော့ နင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ငါ့ကိုပေးလိုက်... ငါ့ယောင်္ကျား နေ့လည်ကျတော့ ပြန်လာပေးလိမ့်မယ်… နော်.. ကူညီပါဦး”
“ဟုတ်လား… ငါ့မှာလည်း ပိုက်ဆံထုတ်ထားတာ နည်းနေတယ်…” ဆိုပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်လိုက်တော့ ၁၀ တန်တစ်ရွက်နဲ့ အကြွေတွေပဲတွေ့တော့
“ဟင် တစ်ဆယ်ထဲလား… ရှိသေးလား ရှာပါဦး… အရေးကြီးလို့ပါ…” ပြီးတော့ ဆက်တိုက်ပြောသည်။
“ရတယ် ရတယ်.. ဒီတစ်ဆယ်ရရင် ငါနောက်တစ်ယောက်ဆီက ထပ်ချေးလိုက်မယ်… ငါ တက္ကစီ ငှားရမှာဆိုတော့ မလောက်သေးဘူး။ ငါ့ကိုလည်း ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ဦးနော်…”
ကျွန်တော်လည်း ယောင်ယောင်မှားမှားနဲ့ လိပ်စာကဒ်ထုတ်ပေးလိုက်မိသည်။ အ
အဲဒီအမျိုးသမီး ထွက်သွားတော့မှ … အတွေးတွေက၀င်လာသည်။
အလုပ်ကလာတယ်လို့သာပြောတယ် ပုံစံက စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့။ အင်းလေ.. ဒီနားမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတော့ ရုံးမှာလုပ်တာမဟုတ်ပဲ ဆိုင်တွေမှာလုပ်တာနေမှာပေါ့။
သြော် ငါကလည်း ငါ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ ပေးလိုက်ပြီး သူ့ဖုန်းနံပါတ်မှ မတောင်းလိုက်မိ။
တစ်ဆယ်ထဲနဲ့ ပြန်လာပေးရမှာ သူအလုပ်ရှုပ်နေပါဦးမယ်။ မပေးနဲ့လို့ ပြောလိုက်ရကောင်းသား နဲ့ အတွေးတွေ ပလုံစီကာ ဆက်ပြီးတော့ လမ်းလျှောက်လာခဲ့သည်။
ညနေ ရုံးဆင်းခါနီးတော့မှ မနက်က ပိုက်ဆံတောင်းသွားတဲ့ မိန်းမကို ပြန်သတိရကာ… ဖုန်းဆက်ပြီး ပြန်ပေးမယ်ဆိုတာ… မလာသေးပါ့လား…. မိုးသာချုပ်သွားသည် ဖုန်းလည်းဆက်မလာ။ အဲဒီတော့မှ စိတ်ကို ဒုန်းဒုန်းချ ငါ အလိမ်ခံလိုက်ရပြန်ပြီလို့သိလိုက်ပြီး အလှူအဖြစ်သဘောမထားနိုင် စိတ်ရှုပ်သာတာ အဖတ်တင်ကျန်ခဲ့ပါသည်။
မိတ်ဆွေကြီး ကိုရဲမွန်ကတော့ သေနတ်ပြ ပိုက်ဆံအတောင်းခံရပေမယ့် တစ်ပြားမှမပေးလိုက်ရ။ ဘာမှ မပြပဲအတောင်းခံလိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ပိုက်ဆံ တစ်ဆယ်အိတ်ထဲက သေချာထုတ်ပေးလိုက်ရပါသည်။ တော်သေးတာပေါ့…တစ်ဆယ်ထဲမို့လို့။ ဒီထက်များတဲ့ ပိုက်ဆံများထည့်ထားမိရင် အကုန်ပါဦးမှာပဲ။
နောက်ကျထမိတဲ့ ပိုးကောင် နောက်ကျမှ ထတဲ့ ငှက်အစာဖြစ်သွားတာပေါ့။
လှိုင်သာယာပြန်ရမှာ ပိုက်ဆံမလောက်လို့ပါ ဆိုတဲ့လူတွေ…
ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်သွားလို့ နယ်ပြန်စရာကားခလေး သနားပါ ဆိုတဲ့လူတွေ…
ဖိနပ်ပြတ်သွားလို့ ဖိနပ်အလှူခံတဲ့ ခပ်တင်းတင်း ကိုယ်တော်တွေ…
ကိုတော့ ပေးဖူးပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ဒါမျိုးကြုံတာ ပထမဆုံးပါပဲ နောက်ဆုံးတော့ ဟုတ်မှာမဟုတ်ပေ။
နောက်တစ်ခါလာလုပ်ကြည့် ခေါင်းအေးအေးထားပြီး မေးခွန်းတွေ မေးပစ်လိုက်ဦးမယ်။
[ခေါင်းစဉ်ကို ကိုရဲမွန်ဆီကနေ ယူထားပါသည်။ အခုတလော စာလည်း မရေးဖြစ် ဘလော့အလည်မသွားဖြစ်။ မှတ်ချက်လည်း မရေးဖြစ်။ ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်…]
Posted by P.Ti at Thursday, August 27, 2009 12 comments Links to this post
Posted by P.Ti at Friday, August 14, 20097comments Links to this post
Posted by P.Ti at Friday, July 31, 2009 10 comments Links to this post
စာမရေးဖြစ်တာ ဘာလိုလိုနဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကြာလာတော့ အသစ်များရှိမလား လာရှာတဲ့လူတွေကို အားနာမိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘလော့မဖတ်ဖြစ်နေတာကြာနေပြီ။ နောက်ပြီး ဆက်ရန်လုပ်ထားတာတွေကလည်း များနေပြီလေ။ ဆက်မယ်ဆက်မယ်နဲ့ မဆက်ဖြစ်တာတွေ စာဖတ်တဲ့သူတွေတောင် မေ့နေလောက်ပြီ။
တနေ့က ခင်တဲ့ အမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ G-Talk မှာ စံပယ်ပန်းဓာတ်ပုံတင်ပြီး “စံပယ်ဖြူတွေတောင် ပွင့်ပြီကွယ်…” ဆိုတဲ့ စာရေးထားတာတွေ့တော့ နောက်ချင်တာနဲ့ ဒီလိုကဗျာလေးစပ်ပြီး အဲဒီအမကိုပို့ရင်း မကေ၊ ညီမ နဲ့ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုပါ ပို့လိုက်ပါတယ်။
ခဏနေတော့ မကေက ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ ဆိုပြီး ပြူးတူးပြာတာဖြစ်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင် မေးတယ်လေ။
ညီမ ကတော့ “တယ်ကောင်းတဲ့ကဗျာလေး... ဆက်စပ်ပေးလိုက်တယ်။ မမကြီး ပြောလေ့ရှိတဲ့စကားလေးသုံးလို့ အဟိ...” တဲ့။
ခဏလည်းကြာ မကေက အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ စာပို့ပါလေရော…
“အားးးးးးးး လုပ်ကြပါအုံး..ကျုပ်ကို ဂျီတော့မှာ ပြသာနာ ရှာနေပြီ... ကပီတိ… ထွက်ခဲ့… သူစတာ... မပါဝူး..ကြောက်တယ်။”
မကေက ကြောက်တယ်ပြောတော့ ကျွန်တော်ဆိုပိုကြောက်တာပေါ့။ သာမန်စာတောင် မရေးရဲတော့ပဲ အမျက်ဖြေကဗျာ တစ်ပုဒ် အမြန်စပ်ပြီး ပို့လိုက်တယ်။
ထူးထူး မထူးထူး ကွယ်
မကေကတော့ အားပေးရှာတယ်လေ “ဒါဆို..ခေါင်းစဉ်လေးတော့ ပေးချင်တယ်.. စံပယ် အဆွေး” တဲ့...
အဲဒီမှာပဲ အမကြီးစိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်တယ် အီးမေးတောင် ပြန်မလာတော့ဘူး။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ထပ်စပ်လိုက်တာပေါ့။ အမကြီးကို မပြရဲတာနဲ့ ရေးပြီးတဲ့ကဗျာ မပုပ်သိုးခင် ဒီမှာပဲ ချရေးလိုက်ရပါတော့တယ်။
ပန်းဆိုတာ အပင်ထက်မှာသာ အလှဆုံးပေမို့
ကဗျာကို ခေါင်းစဉ်ကိုဘာပေးရမယ်ဆိုတာတောင် မစဉ်းစား လိုက်နိုင်လိုက်ဘူး...
မကေကတော့ အကြံပေးပါတယ် "ခေါင်းစဉ် ပေးလိုက်မယ်... စံပယ်အဝေး (သို့) စံပယ်အငေး " တဲ့။
စံပယ်အဝေး ကတော့ပိုလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်... ဘယ်လိုထင်လဲ... အမကြီးတော့ စိတ်ဆိုးပြေကောင်းလောက်ပါရဲ့ :D
အခုပို့စ်တင်ပြီးတော့ "ကဗျာရေးပြီးစကြလို့ စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ကဗျာလေးတွေကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်..." လို့ အမကြီးက ပြောလာပါတယ်။ နောက်ပြီး ကဗျာတွေကိုလည်း "အမှတ်တရ လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါမယ်... " တဲ့။
စိတ်မဆိုး ဗွေမယူတာ ကျေးဇူးပါ အမကြီးရေ... ခင်လို့ စကြတာ ပျော်စရာကောင်းလို့ပါ...
[ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ စပ်ထားတဲ့ကဗျာကို လိုက်မမှီလို့ပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေး ကဗျာလေးပါလို့ ထင်လို့လားမသိ၊ သူတို့ဆီက ပြန်စာမရခဲ့ပါဘူး။ :D]
Posted by P.Ti at Friday, July 31, 2009 8 comments Links to this post
Labels: ကဗျာ, ဟိုရောက် ဒီရောက်
Posted by P.Ti at Sunday, July 19, 20093comments Links to this post
Posted by P.Ti at Tuesday, July 07, 2009 11 comments Links to this post